​कसैसँग मेरो प्रतिस्पर्धा छैन-रजिना रिमाल, गायिका
Tuesday, 20 Dec, 2016 12:00 AM
सांगीतिक क्षेत्रमा नामचलेकी गायिका हुन्, रजिना रिमाल । बाल्यकालदेखि नै गायन क्षेत्रमा लगाब राख्ने रजिनाले हालसम्म लगभग १५०० सय गीत गाइसकेकी छिन् । केहि महिनाअघि विवाह बन्धँनमा बाँधिएकी गायिकाको आगामी गायन यात्रामा केन्द्रित रहे रेजिना पाण्डेले गरेको कुराकानी ।
कस्तो चल्दै छ वैवाहिक जीवन ?
राम्रो छ, रमाइलो ढंगले छचलिरहेको छ ।
विवाहअघि र पछिको जीवनमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
केही न केही फरक त हुन्छ नै । विवाह अगाडि ममीलाई दुःख दिएर खान पाइरहेकी थिएँ । अब त्यो पाइँदैन । सकेसम्म भ्याएसम्मका काम गर्नैपर्छ ।
विवाहपछि गायनमा अप्ठ्यारा आएका त छैनन् ?
छैन । मेरो कामलाई बुझ्ने परिवार हुनुहुन्छ । परिवारको सहयोगले झन मेरो काम बढेको छ ।
दुई वर्षको प्रेमपछि विवाह गर्नुभयो । एउटा प्रेमी र श्रीमान्मा के फरक पाउनुभयो ?
खासै फरक पाएकी छैन । पहिले जस्तै हुनुहुन्छ अहिले पनि । अझ त्यतिखेरभन्दा बढी माया पाएकी छु जस्तो लाग्छ ।
पहिले प्रेम प्रस्ताव कसले राखेको थियो नि ?
हामी दुवैजनाले भित्रभित्रै मनपराइसकेका थियौँ । एउटा रमाइलो भेटघाटमा उहाँले विवाह गर्छौ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो ।
तपाईं बाहुन परिवारमा हुर्किएको नेवार केटासँग विवाह गर्नुभयो । परिवारले कसरी अनुमति दियो ?
अहिलेको समयमा जातपातको कुरा गर्नुभनेको बेकार हो । मेरो ममी पनि नेवार हो । जात मिलाएरै गरेका कयौँ विवाहमा असहजता आएको देखेका छौँ । हाम्रै जस्ता कयौँ वैवाहिक जीवन पनि धेरै राम्रोसँग चलेका छन् । त्यसैले मुख्य कुरा समझदारीको ।
सांगीतिक जीवन चाहीँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
थुप्रै चलचित्र र एल्बमहरूमा गायनको अफर छ । अहिले म त्यही काममा नै व्यस्त छु । एकल एल्बम गर्ने सोच पनि बनाइरहेकी छु ।
सांगीतिक क्षेत्रमा आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ ? कोसँग तिस्पर्धा छ तपाईंको ?
कसैसँग पनि छैन । म आफ्नो काम गरिरहेकी छु । कसैसँग प्रतिस्पर्धामा म छैन । तछाड मछाडमा पनि म छैन । आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्ने, राम्रो गाउनेतिर मात्रै मेरो ध्यान छ ।
आमा कहिले बन्नुहुन्छ ?
अहिले सोचेकै छैन । म पढाई पनि गर्दैछु र काम पनि । त्यसैले व्यस्त छु । अलि फुर्सद मिलेपछि सोच्नुपर्ला ।